Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba eThailand » Amagosa aseBangkok anqwenela ukuba ne-COVID-19
I-Bangkok inqwenela ukuba ne-COVID-19
Amagosa ezempilo eBangkok anikezela ngokungxamisekileyo izitofu ze-COVID-19 kubahlali kwiindawo ezineendawo ekunceda kuzo ukuqhambuka kwesifo.
Urhulumente useke iziko lezitofu ezingxamisekileyo kwisithili seDin Daeng.
Ugonyo lunikezelwa kuye nakubani na oneminyaka eyi-18 nangaphezulu ongumhlali waseDin Daeng, kubandakanya nabaphambukeli.
Iziko kulindeleke ukuba ligonywe malunga ne-2,500 yabantu namhlanje, ukongeza kubantu abayi-3,500 abafumene i-jabs ngolwe-Lwesibini.
Ngamaqela amatyala amatsha axeliweyo e-Huai Khwang nase-Din Daeng, phakathi kwezinye iindawo e-Bangkok, bonke abantu abadala kwezi ndawo zichaphazelekayo banokufumana i-jabs zabo nokuba bahlala phi na.
ISebe lezoLawulo lweZifo kunye neOfisi yeSithili saseHuai Khwang baseke iziko lokugonya ngokungxamisekileyo kwiGymnasium 2 yaseThai-Japan Bangkok IZiko loLutsha, elikwisithili seDin Daeng.
Ngoku kusuku lwesithathu lokusebenza, le ndawo yokugonya ibonelela nge-COVID-19 jabs kuye nakubani na oneminyaka eyi-18 nangaphezulu ongumhlali waseDin Daeng, kubandakanya nabaphambukeli.
Uninzi lwabantu lubonakalisile namhlanje ukufumana inaliti, neziko kulindeleke ukuba ligonywe abantu abangama-2,500 3,500 namhlanje, ukongeza kubantu abangama-XNUMX XNUMX abafumene ii-jabs zabo ngoLwesibini.
I-Indiya ibhabhayisa ngendlela eyoyikisayo kwingcali yezokhenketho
Iindaba zokuhamba eCroatia
Isatifikethi sokunethezeka kwiiarhente ezichaza ngokutsha amava eCroatia
iiyure 11 eyadlulayo
Iindaba zokuhamba ePakistan
IPunjab yasePakistan: Akukho lugonyo lwe-COVID-19, akukho selfowuni!
Iinqwelomoya ezingamisiyo ukusuka eSan Jose ukuya eBoston ziqhubeka kwakhona kwiJetBlue
UMongameli weBhodi yezoKhenketho yase-Afrika: uSuku lwezeNdalo kwiHlabathi liphela ixesha lokucinga